Maxkamada Racfaanka Banaadir oo khafiifisay xabsiga Wariye Koronto. – Radio Daljir
Maarso 3, 2013 4:20 b 0
Muqdisho, March, 3-Maxkamada Racfaanka ee gobolka Banaadir ayaa xukun 6 bilood ah ku ridey Wariye Cabdicasiis Cabdinuur Koronto oo dhowaan maxkamada derejeda ?koowaad ee Baanaadir ay ku xukuntay mudo hal sano oo xarig ah.
Wariye Koronto ayaa loo haystaa waraysi uu ka qaaday Luul Cali Cismaan oo sheegtay inay kufsadeen ciidamada Bilayska ee Dawdalada Federalka ah.
Sidoo kale Maxkamada ayaa sii deysey Luul Cali Cismaan oo ah gabadha ku doodey inay kufaasadeen ciidamada Bilayska ee dawlada Federalka Soomaaaliya, waxaana siidaynteeda loo sababeeyey iyadoo haysata ilmo aad u da’yar.
Maxkmadda derajada koowaad ee Gobolka Banadir ayaa 5 feberaayo 2013 xukun hal sano oo xarig ?ah ku ridey gabadha iyo weriyaha lagu eedeeyey in uu kala qaybqaatey fal danbiyeed lagu sheegay in uu ahaa been abuur iyo sharaf dhac loo geystey ciidanka Soomaaliya.
Maxkmadda Rafcaanka ee Gobolka Banaadir ayaa maanta dhegaystey kiiskan, kadib wax khafiifisey xukunkii halka sano ahaa ee lagu xukumey Weriye Koronto waxaana ay ka dhigtey 6 bilood oo xarig ah taas oo looga bilaabey maalintii la qabtey ee bartamihii Janaayo, maxkmadda ayaa cafis u fidisey gabadha uu weriyuhu waraystey ee ku doodey in la kufsadey.
Kiiskan la xiriira xariga Wariye Cabdicasiis Cabdinuur Koronto iyo Luul Cali Cismaan oo sheegtay inay ?kufasadeen ciidamada Dawlada Soomaliya, waxaana arintan siweyn uga hadlay hay’adaha u dooda xuquuqda aadanaha oo sheegay in dulmi lagu xukumay wariyaha iyo gabadha uu waraystay.
Caawa iyo Daljir, Axad, March 3,2013,,Cabdifataax Cumar Geedi ‘(Hargeysa)